Casserole n'ọtụtụ dị iche iche - Ezi ntụziaka site na pasta, pelmeni, anụ ndị a na-eri na azụ - ihe nchịkọta ụtọ nke a lavish casserole. Kedu esi esi nri cheese, akwukwo nri na anu casserole na otutu?
Nri Ndị na-enyere aka nri
Casserole na multivarque - ntụziaka kachasị mma maka efere dị mfe
Ihe ọ bụla ọ bụla na multivarquet bụ ụzọ dị ukwuu iji megharịa menu ụlọ ahụ na-adọrọ mmasị ma ọ bụ kpochapụ nri abalị ọzọ. Nkwadebe dị ngwa ngwa karịa nchịkwa omenala na oven, na uto adịghị dị ala karịa efere anụcha.
Esi esi esi nri a otutu?
Ntụziaka ọ bụla a ga-eji mee ihe na ngwongwo na-adabere n'ịkwadebe mmepụta nke ngwaahịa ahụ na ịtọba ihe ndị ọzọ, ihe ndị ọzọ nke smart gadget ga-eme ya n'onwe gị, naanị ị ga-achọpụta oge na usoro mmemme. Ịmara ụfọdụ aghụghọ, ị ga-esi nri nke a na-esi nri ngwa ngwa a.
A na-enweta ihe ndị a na-eme n'ọkụ, nke a kụrụ na multivarquet, n'enweghị eriri uhie na-acha uhie uhie ma si na ala. Mgbe ị na-eje ozi, ị nwere ike ịgbanye nri ahụ na -echa ọnụ ya.
Kwadebere efere ahụ na "Bake" mode site na minit 30 ruo otu awa, ọ gwụla ma uzommebe na-enye n'ụzọ ọzọ.
A na-edozi ihe ndị na-eme ka ọtụtụ ndị na-edozi ihe na-enweghị mgbakwunye na nri ndị nwere abụba. Iji mee ka ihe dị mma na-aga n'ihu ka mma iji kpuchie akpụkpọ anụ.
Kedu esi edozi cheese cheese na otutu?
Ntụziaka maka casserole site na cheese cheese na multivarquet dị mfe, ma nkwadebe nke ngwaahịa mbụ ga-achọrọ. Ejiri nlezianya kpoo ocha nke oma, o nwere ike igafe na sieve, nke mere ka ọka ghara iguzo, ya mere, efere a ga-adi mfe. Ọtụtụ mgbe na ihe mejupụtara nke manga, ma ị nwere ike dochie ya na ntụ ọka.
obi chiiz 9-18% - 300 g;
ntụ ọka - 3 tbsp. l.;
mmanụ maka ugbo - 50 g;
unere - 1 pc.
Nsen na shuga, vanilla na nnu whisk ka ụfụfụ.
Obi na-eme ka ọ dị ọcha ma kpochapụ site na sieve.
Gwakọta ma mmadu ma gbakwunye ntụ ọka, bido.
Wunye isi n'ime mmanụ na-esi na mmanụ ma kesaa mpekere seri n'elu.
Esi nri maka minit 55.
Pasta casserole na multivariate
Pasta casserole na multivarquet bụ ihe ngwọta dị mma iji kpochapụ ihe fọdụrụ nke nri nke ụlọ. Ụdị ọgwụgwọ a nwere ike ịmepụta n'ụdị lasagna, ndị ụlọ agaghị achọpụta na e ji nri abalị ụnyaahụ mee ihe dịka ihe ndabere. Jupụta na efere na anụ ọ bụla ọ bụla, mee béchamel na cheese iji were nnu.
anụ a kụrụ - 250 g;
nnu, ose, thyme;
ntụ ọka - 100 g;
ude - 200 ml;
nutmeg - tuo;
Mee béchamel, na-agbachasị ntụ ọka ahụ ruo mgbe ọ na-egbu egbu.
Wunye ude, na-akpali ume. Mgbe ogwu, gbanyụọ ọkụ, oge ya na nnu, ose na nutmeg.
Spasseruyte yabasị, toss mincemeat na ighe ruo mgbe nke ikpeazụ dị njikere, nnu.
Na efere mmanụ, gbasaa efere nke pasta, nke a na-esote akwa anụ anụ. Gaa n'ihu n'ígwé ahụ ruo mgbe ike gwụrụ mmiri ahụ.
Top na ihendori ma fesaa na cheese.
A na-akwadebe ihe na-eme ka a na-emepụta ihe na iri abụọ na ise.
Riz casserole na minced anụ na multivark
A na-akwadebe osikapa a n'ọtụtụ dị iche iche site na akọrọ, mkpụrụ ọka jupụtara na ọka ma jupụta anụ anụ ọ bụla. Ihe mgbakwunye ose ga-abụ ihe mọstad, ọ ga-atụkwasị ihe na-esi ísì ụtọ na ihe ụtọ pụrụ iche na efere. Ọ bụghị ihe siri ike ịkwadebe ụzụ, n'ihi na ngwaahịa adịghị mkpa nkwadebe. Na-efe efe na efere uto.
ude 10% - 50 ml;
mmiri 100 ml;
Mọstad - 15 g;
dil - 50 g.
Rinse na groats, mix na minced anụ, ẹmia ke akwa, mix.
Wunye na ude na mmiri, tinye mọstad, nnu na ose, obere chopped chopped
Wunye ngwakọta ahụ n'ime mmanụ na-esi ísì ụtọ ma sie nri ahụ na "ịcha" maka minit 60.
Ọkpụkpụ ahụ na-anọgide na multivark maka ọzọ nkeji iri na ise nke oge, mgbe nke ahụ ọ nwere ike nweta.
Casserole na anụ a mịrị amị
Meat casserole na multivariate na-akwadebe kacha mfe. Anụ anụ dị mma iji anụ ezi-ehi, ya mere ịgwọ ahụ ga-adịkwu ụtọ. Tupu oge eruo, merie yabasị na mmanya, ya mere, nri nke efere ahụ ka ga-ebelata. Nyere na chiiz anaghị agba aja aja, ị nwere ike iji ihe ọ bụla gbazee nke ọma.
Okpokoro osisi a kpochara - 1 pc.
Na efere mmanụ, tinye otu oyi akwa anụ.
N'elu, kesaa yabasị yabasị na tomato mpekere.
Wunye Mayonezi na akwa cheese.
Esi nri maka "ịcha" 50-60 nkeji.
Casserole site na zucchini na otutu
Akwukwo nri akwukwo nri na otutu uzo bu ihe di nma ma oburu na i choro ime ngwa ngwa dozie nri sitere na ihe ndi di na refrjiraeto. Akpokọta flavor zucchini jikọtara ya na ihe kachasị mma, n'ihi ya, i nwere ike ịnwale ihe dị na ya. Na uzommeputa a, isi akuku aromatic a ga-egwu site na garlic na elu.
ụmụaka na-eto eto - 500 g;
ude mmiri - 100 g;
àkwá - 3 iberibe;
mmanụ ugbo - 50 g;
Pecled zucchini na nnukwu grater.
Achịcha na eyịm na-egbutu n'ime obere cubes, na-ete garlic ma na-ehichapụ elu.
Gwakọta ihe nile, wunye na ude mmiri, tinye nsen, ntụ ọka, oge na nnu na ose, mix.
Na ntanye mmanụ, wụsa isi nke casserole, esi nri maka otu awa na "akpọ".
Mepee mkpuchi na akpọọ nkụ n'otu ụdị ahụ maka nkeji iri abụọ.
Cabbage casserole na ọtụtụ mmadụ
Otu kọlịflawa casserole n'ọtụtụ dị iche iche bụ ezigbo echiche iji nye nri dị mma na-eri ndị na-emerụ ahụ. Maka uto bara ọgaranya na mmasị mara mma, ị nwere ike ịgbakwunye broccoli. Ntụziaka a nwere ntakịrị set nke Efrata, ma ọ nwere ike tinye ya na ndị ọzọ ngwaahịa - anụ, akwụkwọ nri ma ọ bụ mushrooms.
inflorescence nke broccoli - 200 g;
kabeeji agba - 200 g;
sesame, thyme, ngwakọta nke ede ede, nnu;
ude 10% - 100 ml;
akwa - 2 PC.
Mkpụrụ osisi kọlịflawa na broccoli obụpde ruo ọkara a kụrụ.
Mee ihe oriri: tie ude na akwa, tụgharịa ngwa nri, sesame na mix.
Na nnukwu efere, dina kabeeji, wụsa ihendori.
Wụsaa na chiiz, mechie mkpuchi, kọwaa ụdị "Nri".
Ọgba aghara na multivark ga-adị njikere na minit 30.
Potato casserole na mushrooms na multivariate
A potato casserole na multivarquet na-adịkarị njikere na pothed poteto, ma i nwere ike na-eme ka a na efere dị ka nke French gratin, na-egbutu ihe oriri na okirikiri na-agbakwunye ude na cheese ndochi. Dị ka ihe juputara na-ejupụta ọka, ma ọ bụrụ na ị nwere mkpuru ọhịa ole na ole n'enweghị ihe ọ bụla ha mere.
poteto - 5-6 iberibe;
ude 10% - 100 ml
akọrọ mix nke provencal herbs.
Bee poteto na bee ha.
Zọpụta eyịm, gbanye mushrooms na ighe ruo mgbe eme.
Mee nri nke ude, àkwá, ọkara grated cheese, nnu na ngwa nri.
N'ebe ala nke multivarka elere anya, dina akwa poteto, nke a na-esote akwa nke mushrooms. Tinyegharịa ruo mgbe nri gwụrụ.
Wunye ude ihe nri, grate na chiiz, kpuchie ma gbanwee "Izu".
Casserole na multivark ga-adị njikere n'otu awa.
Azụ casserole na multivariate
Ọ bụrụ na ị maghị otú e si eme mkpọtụ na ọtụtụ azụ, nchịkọta a ga-abịa n'aka. Nri dị ụtọ ga-esi n'aka anụ ahụ nwere anụ uhie, dịka ọmụmaatụ salmon ma ọ bụ chum. I nweghị ike imeju ihe a na-enye aka - poteto ma ọ bụ ọka, na-enweghị òkè ha ga-enwe onwe ha.
obere azụ - 500 g;
ude - 100 ml;
akwa - 1 pc.
Mee ihendori si ude, àkwá na ngwa nri, nnu.
Nnu nnu, kesaa na multivark mmanụled, fesaa ya na ihe ọṅụṅụ lemon.
Gbasaa eyịm nke eyịm, wụsa na ihendori, cheese pritrasite.
Esi nri maka minit 50.
Casserole si dumplings na multivariate
Enwere ike ịkwado ihe oriri na-atọ ụtọ n'ụdị dị iche iche site na ihe kachasị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere obere òkè nke ravioli oyi kpọnwụrụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta efere na-enweghị atụ, nke a na-akpọkarị "onye umengwụ" . Site na 500 g nke ngwaahịa a kwụsịrị, maka nkeji iri anọ, ị nwere ike ịme ndị na-eri nri atọ.
yabasị - 2 iberibe;
nnu, ose, nhazi;
Mayonezi - 100 g.
Dumplings obụpde ruo ọkara esie ya ma tinye ya n'efere mmanụ, nnu, ose.
Iberibe ọkara nke eyịm na-anapụta ma na-ekesa na ngwaọrụ nke abụọ.
Na-etinye akwa na Mayonezi ma wụsa efere ahụ.
Na-egwu na cheese.
Na "Eri" kwadebe ụdọ maka minit 30.
Alakụkụ nku na multivark
Esi esi esi nri macaroni na otutu?
Chicken fillet na oven microwave
Ribs na poteto na multivark
Pilaf na ọkụkọ na multivark
Pilaf na multivarque na beef - ntụziaka kachasị mma nke efere Uzbek na-atọ ụtọ
Mmanụ aṅụ achicha na multivark - ihe ụtọ na mfe dessert Ezi ntụziaka na nsụgharị dị iche iche nke ude
Pasta na anụcha anụ na ọtụtụ
Chicken na ngwugwu na oven microwave
Ngwakọta poteto na multivarque - echiche dị iche iche nke efere dị mfe maka ụbọchị ọ bụla!
Eji ya na soseji dị iche iche
Eggplants na multivark - ụtọ na ngwa ngwa ntụziaka maka ọnụ-atọ efere
Nkume maka isi ụlọ ahụ
Na-eji akwa ntutu isi na-agba ọsọ
Ọkụ emere nke brik maka ebe obibi okpomọkụ
Kedu esi esi esi ncha akwa?
Mbadamba ụrọ site na ọrịa nke ụmụ
Ogbugbu nke obi - nsogbu
Kedu otu esi eme ka ezé dị ike?
Ogwu uhie uhie 2016
Bella Hadid n'ime mkparịta ụka maka magazin a bụ Harper's Bazaar na-ekwu banyere ntụrụndụ, paparazzi na ihu ihu ya
Holland Rodin na Colton Haynes
Ngwunye lymph nke Nuchal
Ngwasi mmiri na panties
Mkpakọrịta ọjọọ - ihe ịrịba ama na nsogbu
Mee maka akwarium na aka aka ha
Ilya onye amuma - gini ka ha na-ekpe ekpere?